1 Madzimambo 4:1-34
4 Zvino Mambo Soromoni akaramba ari mambo wevaIsraeri vose.+ 2 Aya ndiwo machinda+ aaiva nawo: Azariya mwanakomana Zadhoki, ndiye aiva mupristi;+ 3 Erihorefi naAhija, vanakomana vaShisha, ndivo vaiva vanyori;+ Jehoshafati+ mwanakomana waAhirudhi, ndiye aiva munyori wezvaiitika; 4 Bhenaya+ mwanakomana waJehoyadha aitarisira uto,+ uye Zadhoki naAbhiyatari+ ndivo vaiva vapristi; 5 Azariya mwanakomana waNatani+ aiva mukuru wevatariri, uye Zabhudhi mwanakomana waNatani aiva mupristi, shamwari+ yamambo; 6 Ahishari aitarisira imba, uye Adhoniramu+ mwanakomana waAbdha, aitarisira vaya vakanga vatorwa nokuda kwebasa rokumanikidzirwa.+ 7 Zvino Soromoni aiva nevatariri gumi nevaviri vaitarisira vaIsraeri vose, uye vaigovera mambo neimba yake zvokudya. Mumwe nomumwe aifanira kugovera zvokudya mwedzi mumwe chete pagore.+ 8 Aya ndiwo aiva mazita avo: Mwanakomana waHeri, kunzvimbo ine makomo yaEfremu;+ 9 mwanakomana waDhekeri, kuMakazi nokuShaaribhimu+ neBheti-shemeshi+ neEroni-bheti-hanani; 10 mwanakomana waHesedhi, kuArubhoti (aiva neSoko uye nyika yose yeHeferi);+ 11 mwanakomana waAbhinadhabhu, makomo ose akatevedzana eDhori+ (Tafati, mwanasikana waSoromoni, akava mudzimai wake); 12 Bhaana mwanakomana waAhirudhi, kuTaanaki+ neMegidho+ neBheti-sheyani+ rose, riri pedyo neZaretani+ muzasi meJezreeri,+ kubvira kuBheti-sheyani kusvikira kuAbheri-mehora+ kusvikira kunzvimbo yeJokmeyamu;+ 13 mwanakomana waGebheri, kuRamoti-giriyedhi+ (aiva nemisha yematende yaJairi+ mwanakomana waManase, iri muGiriyedhi;+ aiva nenzvimbo yeAgobhu,+ iri muBhashani:+ maguta makuru makumi matanhatu ane masvingo nemizariro yemhangura); 14 Ahinadhabhu mwanakomana waIdho, kuMahanaimu;+ 15 Ahimaazi, kwaNaftari+ (iyewo, akatora Bhasemati, mwanasikana waSoromoni, kuti ave mudzimai wake);+ 16 Bhaana mwanakomana waHushai, kwaAsheri+ neBheyaroti; 17 Jehoshafati mwanakomana waParua, kwaIsakari;+ 18 Shimei+ mwanakomana waEra, kwaBhenjamini;+ 19 Gebheri mwanakomana waUrai, munyika yeGiriyedhi,+ nyika yaSihoni+ mambo wevaAmori,+ neyaOgi+ mambo weBhashani,+ uye paiva nomutariri mumwe chete [aitarisira vamwe vatariri vose] vaiva munyika yacho. 20 VaJudha nevaIsraeri vakanga vakawanda, vakaita sejecha riri pedyo negungwa nokuda kwokuwanda kwavo,+ vachidya nokunwa nokufara.+ 21 Soromoni akava mutongi paumambo hwose, kubvira kuRwizi+ kusvikira kunyika yevaFiristiya uye kusvikira kumuganhu weIjipiti. Vaiuya nezvipo, vachishandira Soromoni mazuva ose oupenyu hwake.+ 22 Zvokudya zvaSoromoni zvezuva rimwe nerimwe nguva dzose zvaiva makori+ makumi matatu efurawa yakatsetseka nemakori makumi matanhatu efurawa, 23 mombe gumi dzakakora nemombe makumi maviri dzaifudzwa kumafuro nemakwai zana, tisingabatanidzi nondo hono+ nemhara+ nemhembwe nehaya dzakakodzwa. 24 Nokuti aitonga zvinhu zvose kurutivi rwuno rwoRwizi,+ kubvira kuTifsa kusvikira kuGaza,+ nemadzimambo ose aiva kurutivi rwuno rwoRwizi;+ uye akava norugare+ munzvimbo yake yose, kumativi ose. 25 Zvino vaJudha+ nevaIsraeri vakaramba vachigara vakachengeteka,+ mumwe nomumwe ari pasi pomuzambiringa wake nepasi pomuonde wake,+ kubvira kuDhani kusvikira kuBheeri-shebha,+ mazuva ose aSoromoni. 26 Soromoni akava nematanga zviuru makumi mana emabhiza+ engoro+ dzake nevatasvi vemabhiza zviuru gumi nezviviri. 27 Vatariri+ ava vaipa Mambo Soromoni zvokudya navose vaiuya kutafura yaMambo Soromoni, mumwe nomumwe mumwedzi wake. Hapana chavakaita kuti chishayike. 28 Vakaramba vachiuya nebhari nouswa hwemabhiza nohwemabhiza anomhanya kwazvo,+ chero kupi zvako kwaiva nenzvimbo yacho, mumwe nomumwe maererano nebasa rake.+ 29 Mwari akaramba achipa Soromoni uchenjeri+ nokunzwisisa+ uye mwoyo unonzwisisa zvakanga zvakawanda kwazvo,+ sejecha riri pamhenderekedzo yegungwa.+ 30 Uchenjeri hwaSoromoni hwakanga huchipfuura kwazvo+ uchenjeri hweVokumabvazuva+ vose uye huchipfuura uchenjeri hwose hweIjipiti.+ 31 Akanga akachenjera kupfuura chero mumwe munhu upi zvake, kupfuura Etani+ muEzrahi naHemani+ naKarikori+ naDhadha vanakomana vaMahori; uye mukurumbira wake wakasvika kumarudzi ose akanga akapoteredza.+ 32 Aigona kutaura zvirevo zviuru zvitatu,+ uye nziyo+ dzake dzakasvika chiuru neshanu. 33 Aitaura nezvemiti, kubvira kumusidhari uri muRebhanoni+ kusvikira kumuhisopi+ unomera parusvingo; uye aitaura nezvemhuka,+ nezvezvisikwa zvinobhururuka,+ nezvezvinhu zvinofamba+ uye nezvehove.+ 34 Vakaramba vachiuya vachibva kumarudzi ose kuti vanzwe uchenjeri hwaSoromoni,+ kunyange kubva kumadzimambo ose enyika akanga anzwa nezvouchenjeri hwake.+